युएइका वरिष्ठ समाजसेवीहरुले यत्ति कुरो बुझ्न जरुरी छ! « Postpati – News For All
युएइका वरिष्ठ समाजसेवीहरुले यत्ति कुरो बुझ्न जरुरी छ!
प्रबासमा रहेका विभिन्न संघ संस्थाहरु मध्य अरब देश युएइमा रहेका संघ संस्थाहरु बेलाबखत विभिन्न विषयमा चर्चाको शिखरमा भेटिन्छन। चाहे त्यो कुनै काण्ड बनेर होस, या संस्थाको निश्चित आचरणमा केन्द्रित बहश बनेर होस ।
युएइका संस्थाहरु बिच एकले आर्कोलाइ आक्षेपको जुहारी हेर्दा यस्तो लाग्छ, यहाँ एउटा बौद्धिक जमात पनि छ। जुन जमातले आफ्नो पुरातन धरातललाई छोड्न क्रमभङ्गता खोजी रहेको छ, बिज्ञानले पनि त्यही भन्छ, कुनै पनि बस्तुले परिस्कृतभइ बिकाश हुन क्रमभंगताको माग गर्दछ तर क्रमभङ्गतामाथि हुने संघर्षलाई सहि दिशा दिन नसके बिसर्जन हुने डर पनि त्यतिकै मात्रामा हुन्छ।
यस्तैबेला नेपाल पत्रकार महासंघको प्रबासशाखा पत्रकार महासंघ युएइ प्रती अन्य संघ संस्थाहरुले समाचार प्रकाशन तथा संन्चार समन्वयमा तत्परता नदेखाएको भन्दै केही समाजसेविहरुले आरोप लगाउने गरेका छन ।
यस्तै प्रबासबाट संचालित केही मिडियाहरुले पनि पत्रकार महासंघ युएईको भबिश्यमाथी औला उठाउदै संस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरुमा खादा र ब्याज ओढेर सम्मान सङ्गाल्ने कार्य मात्र भएको भन्ने खुलेरै आलोचना गरेपछि युएइ पत्रकार महासंघका सचिप मेघराज सापकोटाले उक्त बिषयमाथी खण्डन गर्दै ‘युएइका बरिष्ठ समाजसेवीहरुले यति कुरो बुझ्न जरुरी छ’, भन्दै आफ्नो धारणा यसरी प्रस्तुत गर्नु भएको छ !
हेरौ रेगिस्तान एक्स्प्रेस उर्फ मेघराज सापकोटाको आफ्नै बिचार जस्ताको त्यस्तै;-
नेपाल पत्रकार महासँघ युएई शाखा नेपाल पत्रकार ।महासँघको बैदेशिक शाखा मध्ये एक हो । युएईमा रहेका बिभिन्न सँघसंस्थाहरु मध्ये यसको महत्व र महिमा आफ्नै छ ।
युएईमा रहेका संघसंस्थाहरुमा सबैले सबैलाई खबरदारी गर्नु राम्रो कुरा हो । पत्रकार महासँघलाई पनि गर्नु पर्दछ । तर पत्रकार महासँघ युएई युएईका अरु जिल्लागत सँस्था, समाज, जातिय सँस्था जस्तो …….सेवा गर्ने, पिकनिक खाने, नाचगान गर्ने आदि उद्देश्य लिएको संस्था हैन । यसको आफ्नै उद्देश्य, परिधि र सिमाहरु छन् ।
हामी हाम्रो काम कर्तव्य र क्षेत्राअधिकार प्रति सदैब सचेत छौं । महासँघ समय र परिस्थिति अनुसार यहाँका बिभिन्न सँघसस्थाहरु सँग हातेमालो गर्दै सामाजिक कार्यहरुमा सरिक हुन्छ । तर महासँघको गरिमामा आँच आउने गरी केही कसैसँग सम्झौता गर्दैन ।
कोही कसैसँग हातेमालो गरेकै भरमा उसका बिक्रितिहरुलाई लुकाउने र गलत कार्यको साथ पनि महासँघले दिदैन । अर्को कुरो महासँघ महासयहरुले बुझे जस्तो रासस, एपिएफ न्युज एजेन्सी हैन । कोही बरिष्ठहरुको घैंटोमा उज्यालो कम छ भने त्यसको जिम्मा महासँघले लिँदैन ।
हुण्डी, सुण्डी, परस्त्रीलिण्डी (घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै युएईमा परस्त्री सँग लिभिंग टुगेदर गर्ने) र भिण्डीवाला समाजसेवीहरुले यसलाई नपचाउनु स्वभाविक हो ।
महासँघमा आबद्द पत्रकारहरुले स्वतन्त्र रुपमा समाचार संकलन र सम्प्रेशण गर्छन् । आफु आबद्द मिडियामा छाप्छन । अनुहार छाप्दैनन् । समाचार छाप्छन् । नामलाई प्राथमिकता दिन्नन कामलाई देख्छन् ।
केही समाजसेवीहरुको ब्यक्तिगत स्वार्थ र ईगोलाई महासँघले साथ दिदैन । ४५ वटा होस वा ९५ वटा हुन हामीले सँस्थालाई हेर्ने आँखा एउटै हुन् । कसैलाई टेढो र डेढो आँखाले हेर्न सक्दैन । कसैको लागि स्वार्थी आँखाले महासँघले कोहीसँग न त शत्रुता न त मित्रता जोड्छ । पत्रकार महासँघ वा महासँघमा आबद्द कोही पनि पत्रकार कोही ब्यक्तिको वा संस्थाको खेताला बन्दैन । यो यो लेख यो यो नलेख भनेकै आधारमा समाचार वा लेख पत्रकारहरुले लेख्दैनन र लेख्नु हुन्न । यस अर्थमा महासँघ निरपेक्ष रहन्छ ।
महासँघमा आबद्द पत्रकारहरुले समाचार लेख्दैमा महासँघले लेखेको हुन्न । कुनै कार्यक्रममा सहकार्य वा सहयोग गर्यो भन्दैमा भएभरका मिडियाहरुमा महासँघले समाचार भाईरल बनाउँदैन तर आफु आबद्द पत्रकारहरुलाई सो कार्यक्रममा उपस्थित भएर समाचार सम्प्रेशण गर्न अनुरोध गर्छ, कर गर्दैन । महासँघमा आबद्द पत्रकारहरु निहुरमुन्टी लगाएर ब्याच र खादा लगाउन कही कतै जाँदैन र गएको पनि छैन । गएको हो भने समाचार संकलन गर्न नै गएका हुन् । सो क्रममा कही कतै खादा र ब्याचले पत्रकारलाई सम्मान गर्न चाहेमा सम्मान स्वरुप ग्रहण गर्छ तर बहिस्कार गर्दैन ।
हामी पत्रकारहरु कुनै पनि कार्यक्रममा पत्रकारहरुलाई पत्रकारकै रुपमा हेरियोस भन्दछौं न कि कुनै अतिथि । फलानोको नाम किन आयो वा आएन भन्दैनौ पत्रकारहरु । पत्रकार साथिहरु यो कुरामा सचेत हुनुहुन्छ ।
युएईका बरिष्ठ समाजसेवीहरुले यत्ति कुरो बुझ्न जरुरी छ ।